पाकिस्तानकाे आक्राेश, हङकङमा पेट्रोल बमदेखि रुसकाे भव्य प्रदर्शनसम्म – Jaljala Online
साउन २६, काठमाडौँ ।
पृथ्वी नजिकैबाट गयो क्षुद्रग्रह, तत्कालका लागि टर्‍याे ठूलाे दुर्घटना
वासिङटन : आईफल टावर भन्दा पनि ठूलो एउटा क्षुद्रग्रह अर्थात् आकाशीय पिण्ड पृथ्वी नजिकैबाट गएको छ । पृथ्वीमा हुनसक्ने भयावह तत्कालका लागि भने रोकिएको वैज्ञानिकहरुले बताएका छन् । यद्यपि उनीहरुले उक्त पिण्डको भिडियो फूटेज संकलन गर्न भ्याएका छन् ।
वैज्ञानिकहरुका अनुसार यदी उक्त पिण्ड पृथ्वीमा ठोक्किएको भए जापानको हिरोसिमा र नागासाकीको भन्दा पनि ठूलो क्षति हुने थियो । २००६ मा पत्ता लगाइएको यो क्षुद्रग्रह यही साता पृथ्वीबाट ७० हजार किलोमिटर दूरी परबाट आफ्नै कक्षबाट गएको हो ।
रुसमा विशाल प्रदर्शन, ५० हजार मानिस सडकमा
मस्को : रुसमा निष्पक्ष चुनावको माग गर्दै दशौँ हजार मानिस सडकमा उत्रिएका छन् । आइतबार राजधानी मस्कोमा भएको प्रदर्शनमा ५० हजारजति नागरिक आन्दोलनमा उत्रिएको बताइएको छ । राजनीतिक मुद्दालाई लिएर पछिल्ला केही वर्षयता यहाँ भएका आन्दोलनमा यो सबैभन्दा ठूलो आन्दोलन हो । ‘हामीलाई मताधिकार देऊ !’, ‘जनतालाई ढाँट्न बन्द गर’ जस्ता नारा लेखिएका प्लेकार्ड प्रदर्शनकारीले बोकेका छन् ।
भाजपाका नेताकाे टिप्पणी, ‘भारतको नम्बर वान दुश्मन चीन नै हो !’
नयाँदिल्ली ः भारतीय जनता पार्टीका एक नेता तथा सांसद राकेश सिन्हाले चीन र पाकिस्तानविरुद्ध कडा प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले चीनलाई विस्तारवादी मुलुक भएको आरोप लगाउँदै पाकिस्तानसँग पनि उसको सम्बन्ध नराम्रो रहेको दावी गरे ।
भारतले कश्मीरको विशेषधिकार खारेज गरेपछि चीनले दिएको प्रतिक्रियापछि भाजपाका सांसदले यस्तो प्रतिक्रिया दिएका हुन् । उनले चीनलाई ‘भारतको नम्बर वान दुश्मन’ को संज्ञा पनि दिए । राकेशले बिबिसी हिन्दीका लागि दिएको अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, ‘चीनको त पाकिस्तानसँग पनि मित्रता छैन । चीनसँग हाम्रो सम्बन्ध छ । आर्थिक सम्बन्ध छ । राजनीतिक सम्बन्ध छ । तर हामी पूर्ण रुपमा स्पष्ट छौँ कि, चीन विस्तारवादी हो । र चीन कहिल्यै असल मित्र बन्न सक्दैन । यदी भारतको नम्बर वान दुश्मन कोही छ भने त्यो चीन नै हो ।’
कंग्रेसकाे नेतृत्वमा फेरि सोनिया गान्धी
नयाँदिल्ली : भारतको प्रमुख प्रतिपक्षी दल कंग्रेसको नेतृत्वमा पूर्वअध्यक्ष सोनिया गान्धी फेरि फर्किएकी छन् । अन्तरिम अध्यक्षको रुपमा उनलाई पार्टीले जिम्मा दिएको छ । सोनियाकै छोरा राहुल गान्धी यसअघि अध्यक्ष थिए ।
पार्टीको कार्यकारी समितिको निर्णय अनुसार सोनियालाई अध्यक्षमा चयन गरिएको विज्ञप्तिमार्फत सार्वजनिक भएको हो । पछिल्लो चुनावी परिणामसँगै कंग्रेसको नेतृत्व कसले सम्हाल्ला भनेर केही अन्योल नै थियो ।
संसारभर भारतको विरोध गर्न पाकिस्तानको आग्रह
इस्लामाबाद : पाकिस्तानले विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई १५ अगस्टमा भारतीय उच्चायोग अघि प्रदर्शन गर्न आग्रह गरेको छ । पाकिस्तानी विदेशमन्त्री महमुद कुरैसीले ट्वीटरमार्फत यस्तो आह्वान गरेका हुन् ।
१५ अगस्टको दिन प्रदर्शन गर्दै ‘भारतीय कब्जावाला कश्मीर’मा भएको गैरकानुनी, ‘बर्बर कब्जा’को विरोध गर्न कुरैसीले आग्रह गरेका हुन् । यसअघि प्रधानमन्त्री इमरान खानले भारतले कश्मीरमा लगाएको कफ्र्यू आरएसएस तथा नाजी विचारबाट प्रभावित भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
हङकङको प्रदर्शन दशौं हप्तामा, पेट्रोल बम प्रहार
हङकङ : हङकङमा सरकारविरोधी आन्दोलन दशौं हप्तामा पुगेको छ । आइतबार सडकमा उत्रिएका प्रदर्शनकारीलाई प्रहरीले पेट्रोल बम र अश्रुग्यास आक्रमण गरेको छ । अध्यागमन विधेयकको विरोध गर्दै सुरु भएको आन्दोलनमा अहिले नेताहरुको राजीनामाको माग उठ्न थालेको छ ।
तान्जानियामा तीन दिन राष्ट्रिय शोक
तान्जानिया : तान्जानियामा तेल ट्यांकर विस्फोटमा ६० जनाको ज्यान गएपछि राष्ट्रिय शोकको घोषणा गरिएको छ । राष्ट्रपति जोन मागुफुलीले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै तीन दिनको राष्ट्रिय शोक घोषणा गरेका हुन् । शनिबार राजधानी दार एस सलाम नजिकै मोरोगोरोस्थित तेल ट्यांकर विस्फोट हुँदा ६० जनाको मृत्यु हुनुका साथै ७० जना घाइते भएका थिए । आइतबार भने चार घाइतेको मृत्यु भइसकेको स्थानीय मिडियाले जनाएका छन् ।
सवारी दर्ता र नवीकरण शुल्क १० प्रतिशत बृद्धि
हेटौंडा : प्रायः यातायात कार्यालयमा सेवाग्राहीको भीड हुने गर्छ। तर, हेटौंडास्थित यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय भने सुनसानजस्तै देखिएको छ। कार्यालयमा सेवा लिन कुर्नै पर्दैन। सेवाग्राही प्रदेश २ स्थित यातायात कार्यालयबाटै सेवा लिन रुचाउँछन्। प्रदेश ३ मा सवारी दर्ता र नवीकरण शुल्क बढी हुँदा प्रदेश सरकारको मुख्य आम्दानीको स्रोत सवारी दर्ता र राजस्व संकलन न्यून हुँदै […]
भदौ ७, काठमाडौँ । महोत्तरी बर्दिबास–३ गौरीडाँडाका सरोज भनिने श्रवण थापा असार ३१ गते मृ’त भेटिए । यो खबर हामीले अन्नपूर्ण पोष्टबाट लिएका हौ । उनको श’व बीपी राजमार्गअन्तर्गत बर्दिबासस्थित स्मृति पार्कनजिकै फेला परेको थियो । घटनाको एक महिनापछि सरोजको ह’त्या भएको खुलेको छ । पत्नी पूजाले भाडाका पाँच अप’राधी प्रयोग गरी ह’त्या गराएकोे पाइएको […]
आज २०७६ असोज १७ गते शुक्रबार तपाईको भाग्य कस्तो छ ? थाहा पाउनुहोस्
आज २०७६ असोज १७ गते शुक्रबार । ज्योतिष शास्त्रमा जन्म समय अनुसार फलादेश हुन्छ । सोही अनुसार उनीहरुको दैनिकी कस्तो रहन्छ ? भन्ने विषयमा भविष्यवाणी गरिन्छ । तपाईको आजको दिन कस्तो रहनेछ ? ज्योतिष एस्ट्रो राजले यस्तो फलादेश गर्नुभएको छ- मेष कर्मसिद्धिको समय छ । कर्मप्राप्तिका लागि गरिएका प्रयास सफल हुनेछन् । मनमा शान्ति मिल्नेछ। […]